Fahatanjahana ny jono | Reef Resilience
Ny fahasalamana, ny tontolo iainana tanteraka dia manana fahaizana bebe kokoa hanohitra ny fanovana amin'ny fanelingelenana. Amin'ny fisarihana, io faharetana io, na ny fahafahana miatrika ny korontana, dia mety hisy fiantraikany eo amin'ny fitontongan'ny biôlôjia toy ny aretina, saingy mety ho simban'ny olombelona koa izany - miteraka fitaintainana toy ny fandotoana, ny fihenan-tsakafo, ny fahaverezan'ny toeram-ponenana (fandringanana ny vatohara) fitambarana fanentanana toy ny fiovan'ny toe-trandro. Ny faharetana kosa dia mety hitombo amin'ny hetsika fitantanana.ref
Mampiasa fomba nentim-paharazana nentim-paharazana ny fiaramanidina mpanjono Maldiviana. Ny fiarandalamby dia ahitana sambo nentin-drazana Maldiviana, izay mampiasa tehina sy fanjonoana ho an'ny tonon-gilasy ary trondro reefatra, ka mahatonga azy io ho iray amin'ireo fiaramanidina mpanjono mampidi-doza farany. Sary © Alex Barron
Ny faharetana dia voafaritra tsara amin'ny maha-rafitra ny rafitra hamaly sy hanakorontana ny fikorontanana ary mitazona ny tena endriny, ny rafitra, ary ny valiny. ref Mba hahombiazan'ny fitantanana ny jono dia misy ny filàna ilaina hahatakatra ny faharetan'ny rafitra sosialy sy ara-tontolo iainana. Ao anatin'ny sehatry ny jono, ny 'rafitra' dia ahitana ny loharanon-dranomasina, ny morontsiraka ary ny tontolo iainana an-dranomasina, ary ny vahoaka izay miankina amin'izany.
Ho an'ny fanjonoana, mety ho vokatry ny rafitra marefo ny mety hahitana: maharitra tahirin-trondro izay manohana ny fitandroana maharitra ny asany, ny maha-izy azy ary ny kolontsaina eo amin'ny fiarahamonina manjono, ny faharetan'ny fitantanana an-dranomasina hafa, ary ny fahasalamana ara-tontolo iainana maharitra. ref
Ny adin-tsaina ara-tontolo iainana sy antropogenika dia mety hanimba ny fihenan'ny jono mahasalama (oh: ny fandotoana, ny fitrandrahana diso tafahoatra, ny fahaverezan'ny toeram-ponenana, misokatra amin'ny varavarankely vaovaofiovan'ny toe-trandromanokatra fisie PDF ). Rehefa mihena tanteraka ny faharetana, dia mety hitranga ny fiovaovan'ny toetrandro any amin'ny fanjakana hafa izay tarihin'ny karazana zavamananaina samihafa. ref Ity 'toe-panafody hafa' ity dia mety hahaliana (ohatra, rafitra iray izay afaka manohitra ny fanelingelenana sy ny fihazonana ny asa tena ilaina) na tsy miraharaha (ohatra, manohitra ny fanandramana hanatsarana ny fanatsarana na ny faharetana ny rafitra).
Ny faharetana dia fananana iray izay mahatonga zavatra sarotra hiovana. Ny fanjakana kivy dia mety hiorina amin'ny fanovana. Ohatra, ireo mpikaroka dia nandinika ny fomba mety hitrangan'ny fihoaram-pefy mahomby mety hiteraka vokatra mahatsiravina izay sarotra ny misoroka na manafoana (ohatra: ny fandrika ref). Ny fiarovana amin'ny ankapobeny dia mety hiorina amin'ny fanovana. Ohatra, any atsimo atsinanan'i Azia, ny haran-dranomasina, izay simba noho ny fomba fanjonoana manimba, toy ny fanjonoana sy ny fanjono, dia nanova ireo substrata vatomamy vatosoa ho ao anaty fandoroana tsy misy alaola izay tsy manana fanantenana firy fanarenana voajanahary. ref Na ny vatoharan-damosina aza dia mety hiteraka fahavoazana eo amin'ny fiasa ara-tontolo iainana, ka mahatonga ny fihenan'ny vatohara sy ny fihenan'ny bakteria ambany kokoa. ref
'Ny fihanaky ny fihanaky ny herisetra dia tsy dia misy fiantraikany amin'ny fiantraikan'ny toe-javatra miova ary afaka manamboatra haingana kokoa.' ref
Ny vahaolana amin'ny fomba fitantanana maharitra ny fitaterana ny haran-dranomasina dia fantatra amin'ny ankapobeny amin'ny karazam-borona rehetra. Ny faharetan'ny fanjonoana dia manohana ny haran-dranomasina maharitra fitantanana, izay mirakitra ny fampiasana fitaovam-pizahan-java-manjono, ny dingana arahina mpandray anjara, anisan'izany ny mpanjono, ny fanavaozana politika, ary ny ezaka fanodinana ny tsena.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoTranombokim-bokin'ny Coral Reef
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoManorina ny faharetana amin'ny fanatsarana ny fiovaovan'ny toetr'andro amin'ny sehatry ny fisaka sy ny Aquaculturemanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoAfaka ny Hifanampy ve Isika ary Inona no safidy ananantsika? Fampidirana ny masoivoho amin'ny adihevitra miorina amin'ny fahantrana